Ungayikhulisa kahle ingane ongayizali
ONGOTI bathi ukukhulisa ingane ongayizali akuyona into elula kodwa kuyenzeka
Bongiwe Zuma | October 26, 2021
UKUKHULISA ingane ngenye yezinto abazali abazithola zinzima ngenxa yokushintsha kwendlela yempilo kanjalo nezinto ezenza izingane ziphume esandleni. Lokhu kuba nzima kakhulu uma owesifazane ezozithola esekhulisa ingane angayizali.
Kungaba ayifice isikhona emshadweni noma ezalwe esekhona komunye umuntu wesifazane. Imvamisa lo mama osuke engayizali ingane kuba nezingqinamba eziningi ekukhuliseni leyo ngane ngoba enye isuke isimazi unina futhi ingamamukeli njengomzali noma naye angayamukeli ingane.
Ongoti bathi ulaka lwezingane nokungamukeli isimo, yikona okuvamise ukuthi kwenze izingane zidlebeleke zingalawuleki ekhaya. Ungoti ocija abazali ngokukhulisa izingane, uNkk Naja Hall uthi nabo abazali baba nomthelela omkhulu ekutheni ingane izibone yamukelekile noma ingamukeleki ekhaya.
"Kuba nokungabaza kakhulu kumama angazi kahle indlela azizwa ngayo ngengane. Ngivame ukubona omama abaningi begcwele ulaka kodwa uma sibhekisisa kahle kusuke sekuhambisana nokungazethembi. Imizwa yabo igcina isiphenduka ulaka nenzondo enganeni nokuyinto abasuke bengayiqondile,"kusho uNkk Hall.
ALINGENZEKI iphutha lokukhuluma ngengane ikhona ngoba izozizwa ingamukelikile ekhaya Isithombe: SIGCINIWE
Lokhu uNkk Hall ukuchaza njengento esuke idinga owesifazane kakhulu ngoba izingane kusuke kusenzima ukulawula imizwa yazo nokuhlukanisa okuyikhona. INingizimu Afrika ingelinye lamazwe abhekene nale nkinga izingane ezikhuliswa abazali abangazizali noma abagcina sebexabana ngenxa yazo. Yize kunjalo kodwa bakhona abesifazane ababonakala emphakathini benza kahle futhi bezikhulisa ngendlela encomekayo izingane zabo.
UMnuz Mxolisi Zulu (35) waseMbumbulu ungomunye wezingane ezikhuliswe umama ongamzali. Utshele leli phephandaba ukuthi unina washona eneminyaka eyisikhombisa, kwadingeka ukuthi ayohlala noyise. Yilapho waqala khona ukwazi ngonina uNkk Khonzeni Mngomezulu Zulu nokwaba nzima ukuthi amamukele.
"Umama washona ngimncane kodwa ngase ngimazi ngisondelene kakhulu naye. Uma sengitshelwa ngomama omusha ngaba nokudideka ngoba naye wayengiphethe kahle sengazi ukuthi umama wami. Bekwenzeka uma engithethisa ngibone sengathi akangithandi kodwa ngokukhula sekukhona nezinye izingane zasekhaya, ngabona uthando lwakhe olweqiniso uyanginakekela ayikho into ethi akangizali ngizwa ngendaba. Kuyimanje uthanda nezingane zami usezikhulisile, usize nezingane eziningi angazizali nokwenza ngibe nezifiso ezinkulu ngaye,"kusho uZulu.
UNKK Khonzeni Zulu okhuthaza abesifazane ngokuthanda izingane abangazizali njenge zabo Isithombe: Sithunyelwe
Unina uNkk Zulu uthe kulula ukukhulisa ingane ongayizali uma ungowesifazane ngoba kusuke kufanele uyithande njengeyakho.
" Uma ungowesifazane yamukela ukuthi ungena ebudlelwaneni nomuntu onengane. Ungacabangi izinto eziningi ezizokudidisa ingqondo, vula inhliziyo uzitshele ukuthi ingane uzoyithanda njengeyakho. Kuzokwenzeka ikhule abantu bayitshele izinto eziningi nawe zama ukuyibekela iqiniso. Ezami izingane zikhule ngizithanda zonke zingazi nokuthi kwenzekani kodwa sebeqalile abantu bayazitshela nakhona ziyathandana azifuni nokukholwa ukuthi zehlukene ngomama. Ukukholwa nakho kuyasiza kakhulu uma ungumama,"kusho uNkk Zulu.
Izindlela ezingakusiza ukubambisana nengane
-Khuluma noyise wengane ukwazi kabanzi ukuthi ngokwakhe iyiphi indima afisa uyidlale empilweni yengane nokuthi uma kukhona okudinga umazise ngakho ngengane kumele wenzenjani.
-Hlaziya ngokwakho nokuzazi ngendlela ozizwa ngayo bese umazisa ukuthi ungahamba ufikephi nokudlala indima yakho. Mazise zisuka ngalokhu ongeke wakwazi ukukwenza.
– Uma kukhona ungaboni ngasolinye ngengane, ningakhulumi noma nithethisane ngayo isendlini. Izozizwa ingamukelekile ekhaya.
-Uma ususondelene nengane, uzobona amaphutha emaningi kuyo ngoba isencane kusekuningi esazokufunda ngempilo. Zama ukugxila kulokhu okuhle ungabhekisisi kakhulu kuze kweqe.
-Ungazami ukushintsha ngokushesha zonke izinto ezijwayelwe ingane ngoba ufuna iphile ngendlela ezogculisa wena.
-Zinike isikhathi sokuthi ushaywe umoya ungagcini usuzwela kalula uma kunezinkinga ekhaya ikakhulu eziphathelene nengane.
– Uma ningaboni ngasolinye ngezindlela zokukhulisa ingane, tholani usizo kongoti nosonhlalakahle.
– Uma seyikhulile inemibuzo, iphendule ngeqiniso ngoba abanye abantu bazoyitshela okungekona.
–Zihlanganise nabanye abantu abakhulisa izingane abangazizali nengawe ukuze nichushisane ngolwazi.
– Thola izinto eningazenza njengomndeni nidlale nemidlalo eyahlukene ndawonye, nivakashele nezindawo ukuze nisondelane nengane.